Jaamacadda sayniska kombiyuutarka ee Cuba waxay bixisaa koorsooyin ajaanibta | Laga soo bilaabo Linux
Sida asxaabteena u daabacaan aadanahaUCI (Jaamacadda cilmiga Informatics) halkan waxaa laga bilaabay wicitaan loogu talagalay xirfadleydaas (ajaanibta ... taasi maahan Cuban) ee doonaya inay kaqeybqaataan shahaadada jaamacadeed ee Software-ka Bilaashka ah.
Taariikhdu waxay noqon doontaa inta udhaxeysa Nofeembar 17 iyo 21 ee sanadkan, halkan waa wicitaanka:
Ilaa hadda si fiican. Waxa kaliya ee aan "sifiican" u fahmin ama aan u fahmay, waa in markan kaliya loogu tala galay ajaanibta, taasi waa, ka warrama kuwa xiiseynaya jasiiradda? Sida ku xusan waxa la ii sheegay fursadaha mustaqbalka, dadka reer Cuba ee xiisaynaya way awoodi doonaan inay ka soo qayb galaan, halkaas oo intaas dheer ... waxaan bixin lahayn qadar lacag ah oo kala duwan, maadaama heerka dakhligeennu gebi ahaanba ka duwan yahay.
Waxba ma jiraan, kuwa ka soo qayb gala, hambalyo, runtii, hadaad jeceshahay, waxaan ku kulmi karnaa halkan caasimada waana is naqaanaa FromLinux 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Jaamacadda sayniska kombuyuutarka ee Cuba waxay bixisaa koorsooyin ajaanibta
Xarunta CESOL waxay horey u siisay koorsooyin dhowr ah muwaadiniinta. Dhawaanna waxay bilaabi doontaa dalabyo cusub, hadda waxay fursad weyn u tahay xirfadlayaal badan oo adduunka intiisa kale ka yimid.
Waan salaamayaa qoyskeyga oo ka socda FromLinux oo aad ayaad ugu mahadsantahay sida aad noo caawisay.
Cuba waxaan ugu yeernaa "go'doomin gudaha ah" 🙁
Waad salaaman tahay, wadankeyga Chile, shahaadada jaamacadeed waxay u dhigantaa 30.000 oo doolar waana inaad deyn ku gasho noloshaada oo dhan si aad isaga bixiso, taas bedelkeed waxaad heysataa shahaadooyin bilaash ah sida ay noqon laheyd.
Hadana hadalku wuu rumoobay: "Eebbe kibis ayuu siiyaa kan aan ilkaha lahayn", waxaan leenahay shaqooyin bilaash ah iyo tababar wanaagsan laakiin fursado shaqo ayaa ka jira dhulka, ma jiraan wax cusub oo ku saabsan cilmiga tikniyoolajiyadda macluumaadka, geeddi-socodka ayaa lagu maamulayaa waraaqaha sida 30 sano ka hor markii howsha la aasaasay, markii ardaydii ugu horeysay ee ka qalin jabisay UCI ay ka soo muuqdeen joornaalada marwalba oo ay ka cawdaan in ay yihiin injineer ay isaga u dhigaan shirkadaha in waxa kaliya ee ay kumbuyuutarka ku sameeyeen uu ahaa miisaska Excel iyo qaab.
Tan aniga kama dhahayo waxaan dooneynaa Dooxada Silicon laakiin, gosh, maskaxda qarniga 21aad markasta oo aad xusto fikrad cusub waxaad ogaaneysaa inay soo marto 20 heer oo kala duwan oo auth ah si loo dhaqan geliyo, wax soo kordha ma jiraan xilli aan is gelinay "Habka qudaarta".
Waa war aad u wanaagsan marka waa inay koorsooyin ka jiraan dalkayga, laakiin halkan kama fikirayaan Software-ka Bilaashka ah inay beddel wanaagsan u noqon karaan Software-ka gaarka loo leeyahay.
Waxaan u maleynayaa inay tahay in la iskiis isu maalgeliyo. Hindisaha waa mid aad u wanaagsan, si kastaba ha noqotee.
Ma aqaan xaqiiqada Cuba, in kastoo aan u arko si naxariis leh, maadaama dad badani ka soo jeedaan Isbaanish. Hindisahan, mabda 'ahaan, wuxuu ila egyahay aniga, marka laga reebo inaysan isku mid ahayn qof walba, taas oo, markii lagu wareejiyo softiweer bilaash ah, ay umuuqato mid aan la aqbali karin.
Faahfaahin foolxun oo aan reer Cuba ka soo xaadiri karin markan.
Way igu adag tahay inaan helo sabab.
Ku jawaab knon
Waxay umuuqataa inay leedahay waxyaabo aad u kaladuwan, ma aqaano hadii kuwa kaqeybgalaya ay awoodaan inay bartaan waxyaabo gaar ah. Hagaag, wali waan fahansanahay inay hordhac u tahay, kuwa xirfadlayaasha IT-ga ah laakiin aan wali si buuxda ushaqeynin Linux.
Waxa aan aniga igu kordhinayn waa Kuubbaankaas. Waan fahansanahay hadii aad dhahdo in laysku daray waa sababta oo ah waxaa jira fasalo qaar oo ay tahay inaad kaqeyb gasho, sidaa darteed wax badan ayey guuleysan laheyd hadii ay si cad ugu furaan dadka reer Cuba. Marka la soo koobo, macno darrada waxyaabaha qaar.
Jawaab Jose Damian
Abel Garcia Vitier dijo
Waxaa jira koorsooyin 3 ah, oo loogu talagalay noocyo kala duwan waxayna ku dhici doonaan is barbar dhig. Qaabka isku dhafan ayaa ah sababta oo ah wakhti ayaa loo sii daayay daraasad madax-bannaan marka lagu daro 20 saacadaha xiriirka (4h maalintii). Maxaa ku saabsan sababta ajaanibta aan mar hore uga tagay faallo ku saabsan. Wax walba macno ayey leeyihiin, waxay kuxirantahay aragtida.
Jawaab Abel García Vitier
Ma doonayo in la garab istaago qof kasta, laakiin waxay u egtahay inay qaateen isla koorso la heli karo oo keliya ardayda deegaanka dhowr jeer iyaga oo aan awood u siin karin gelitaanka ardayda ajaanibta ah waxayna u sameeyeen koorsadan xoogaa magdhow ah.
Ku jawaab Gam
Waan ixtiraamayaa faallooyinkaaga laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan cadeeyo in baaqan loogu talagalay ajaanibta kaliya loo sameeyay si looga jawaabo dalabka dibada ee gaar ahaan seddexdan koorso ay leeyihiin. Kuuba, shahaadada jaamacadeed ee jaamacaduhu siiso Cubans waa BILAASH koorsooyinkan ayaa la isugu yimaadaa oo lagu shiraa iskuuladeena caadiga ah ee Jiilaalka iyo Xagaaga iyo hadii hay'ad kasta oo Kuuba ah ay rabto inay koox ku tababarto koorsooyinkan, way sameyn karaan codsiga iyo macalimiinteena aad u raalli ah oo aan wax lacag ah ku bixin. Dhamaan waad salaaman tihiin waxaanan rajaynayaa inaan cadeeyay shakiga.
Waad ku mahadsan tahay sharraxaadda, si weyn ayaa loogu qancay.
Dhab ahaantii Cuba waa tusaale lagu daydo dhammaan quruumaha meeraha, siyaasadaha noocan ah ee waxbarashadu kama mid aha barnaamijyada dowladda ee dalal badan oo aan la horumarin. Tanina sidoo kale way tagtaa, in kasta oo ay u waxyeello u tahay waddankayga, xitaa marka laga hadlayo kacaanka Nicaragua, dawladdu waxay sii waddaa adeegsiga Windows XP (oo aan mar dambe la taageerin) iyo mashiinnada, badankood waa nooca pentium III iyo IV.
Waa wax laga xumaado in aanan u tartami karin tan, waxa ugu fiican ayaa ah in dhalinyarada ay heystaan ​​fursadan weyn iyo waliba walaalaha Cuba, jiilka cusub, waxaan dhihi lahaa, wuxuu ku nool yahay marxalad aysan waligeed soo marin jiil kasta oo dal ka yimid, sidaa darteedna waa inay ka faa’iideystaan. Hambalyo compas ka desdelinux.
Wanaagsan, ugu horreyntii faallooyinkaas oo ah "Cuba waa tusaale adduunka oo dhan laga raaco" (sic) miyayna tahay inaan dhammaan dib ugu noqonno waqtiga oo aan hoos u dhigno heerkeenna daawada, tikniyoolajiyadda, waxbarashada, xorriyadaha madaniga iyo dhaqaalaha? Sababtoo ah waxay bixiyaan 4 koorso »bilaash ah»? Yurub gudaheeda sidoo kale waxay bixiyaan oo maahan kaliya koorsooyin laakiin xirfada oo dhan waa "bilaash" anaguna waxaan ku dhex gariirnaa xorriyadda mana dili doonno qof kasta oo doonaya inuu aado Mareykanka ama Koonfurta Ameerika ama Afrika sidaa darteed hadalka yaroo yari iyo gaar ahaan kuwa aan nooleyn iyo "ku raaxeysta" xukunka kali-talisnimada ah
Su’aal ma ku weydiin karaa? Gelitaanka internetka ee reer Cuba, waa sidee? Waxaan fahmay inaadan marin uheynin www
Oh iyo waliba sidee ayey ugu xirmaan internetka? Via casriga ah? Via fiberka? Via wifi? Xawaare intee le'eg? 50 megs? Ma qorsheyneysaa inaad kor u kacdo hal gigis iyo mid hoose dhowr bilood gudahood? Ma jiraan dhibco badan oo wifi bilaash ah? Ugu dambeyntiina, halkee laga doonayaa inay ka shaqeeyaan? Waxaan qiyaasayaa inay isticmaali doonaan router laga sameeyay Cuba ama Albania maxaa yeelay haddii kale waxay khiyaameyneysaa kacaanka.
Wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado dhulka Che iyo Fidel, maalin maalmaha ka mid ah ayaan iska qori doonaa shahaadada mastarka oo aan xiisaynayo, marka hore waxaan helaa shahaadadayda oo waxaan u duulayaa jasiiradda
Koorsada la bari doono waa mid aad u wanaagsan, laakiin ma ahan kuwa Cuba, waa wax laga xishoodo in, ay ahayd in qof walba lagu qaado oo lagu soo oogo.
Ku soo jawaab Norbe